Date My Pet » 7 Totally Unique Ideas For A Date
Last updated: Oct. 27 2020 | 3 Maminitsi verenga
Dating, isu tose vakambokundikana misi zvakanaka, vamwe yakagomara / mugwenga ndivo, vamwe hwokutambura vachadedera vakakodzera vane uye tinotarisira vamwe tarenda / zvinonakidza vakura. Saka chii chinoita kuti zuva chinoshamisa? Ichokwadi munhu uri musangano rine zvakawanda zvokuita nacho, Zvisinei ndinofunga pane zvakawanda izvozvo. Ndinofunga chinhu zvechokwadi kunogona kuita zuva mira kunze ndiyo vaiita ruzivo une pamwe, uye kubatana uku kunounza.
Kuita mubhawa kana the pub kuti zuva rokutanga zvikuru Cliche uye vachigere kuva kudya inonaka, unogona kuwana kuchifinha kana ukaita izvozvo vhiki imwe neimwe kuti musi usiku nemumwe wako. Kana iri zuva rokutanga kana nguva dzose pavhiki 'zuva usiku' chaizvoizvo Spice nayo achikwira vanosarudza kuita chinhu mafaro uye maoko.
Ko munoziva kuti vaiita zviitiko kusika kubatanidza vanhu? Zvinoshanda seizvi. Kana muine mhando ruzivo uchava vanewo manzwiro kuti vaende pamwe chete nayo. Saka somuenzaniso kana iwe abseil kubvisa pamawere zvimwe nekusangana vamwe kutya, zvichida kutya, adrenaline uye yakakwirira. Zvino kana tiine nekubvimirana nomumwe munhu, uye isu tiri kuenda kuburikidza zvakafanana manzwiro pamwe chete, izvi zvinoumba chisungo. Nokuti chimwe chinhu tinogonawo kunzwisisa mumwe uye ave chinhu kutaura, Zvisinei nevakadzi pane zvakawanda chinobatika chikonzero. Apo vakadzi chekuita (zvakanaka kana inofadza) ruzivo nemunhu makemikari anonzi Oxytocin chaizvoizvo chinozadzwa akasunungura mumiviri yedu. Ndiwo Muitiro unobatanidza kemikari uye ndicharizivisa tinzwe pedyo munhu tiri chiitiko. Zvino vaviri kuti vamwe adrenaline kuita chinhu chinofadza, uye vamwe muuropi uye kweserotonin kuita chinhu mafaro, uye rakanaka vanongomhanyirira, vane Mix. Paunoona nenzira iyi zviri nyore kuona kuti tinogona kuwira munhu isu nomumwe.
Saka tingashandisa sei izvi pfungwa zvokufambidzana? nyore, unoda kuronga misi kuti pave kuti nekubvimirana uye anosanganisira kunakidza chaizvo maatomu akafanana. Chinofadza ndechokuti dzose, vanhu zvezuva nezuva vasina zvinoedza Kutarira-alikes vanogona kusika izvi vorudzii zvakaitika. Uye ichi anokupai ane mupendero pamusoro vakwikwidzi dzenyu. Sei simba uye kukwezva kukwanisa kusika ruzivo kworudzi urwu, uye kuti nzira huru mudzakisirwa kukwira kukwezvwa. Patinonzwa kwakawedzera manzwiro uye chokuedza nomumwe munhu tinonzwa kukwezvwa kwavari.
Rimwe kubatsira kusarudza chinhu yakasiyana uye kunakidzwa nokuti musi yenyu kuti zvichava isununguke, riri kunyanya kukosha kana musi wokutanga. Paunenge uchishanda sei kubika pizza pamwe hauna nguva yakawanda kuti kunzwa netsa. Uye anogona kubvumira mikana kuwana mumuviri flirty mumwe nomumwe. Zviri Kazhinji zvakaoma kubata munhu imi kashoma kuziva kana musi mubhawa, Zvisinei kana muchiita chinhu anoshanda pamwe chete zviri nyore zvikuru. Kana uine kushandira pamwe pane basa riri nani, yeuka kuti nekubvimirana kunoita kubatanidza. Uye kana basa rako riri kunonakidza uye uchiona pachenyu kuseka ichi kuchakubatsira vaviri kuzorora.
Heano mamwe mazano imi:
Cooking pamwe - Cooking pamwe chete vanogona kuva yakawanda kunonakidza. Unogona kana bhuku yokubikira chidzidzo kana kubika chinhu pamusha (kuzvitutumadza izvozvo haasi zuva rokutanga).
zviumbwa - Zvekare uyu maoko pamusoro pfungwa uye kunogona seksikäs chaizvo. Funga firimu 'Ghost'. Uye chikuru ndechokuti kuchava keepsake kubva zuva iri muchimiro chero iwe wakaita. Just nechokwadi musi venyu vanoziva kuti kupfeka mbatya ekare.
A vachifurwa kunoshamisa girl - Takataura nezvokusika munhu nekubvimirana uye kana usina nguva yakawanda kana iwe uri munhu bhajeti kufamba pamwe chete vanogona kuva akakodzera. Kazhinji vanhu vanoona zviri nyore kuzorora uye kutaura kana vari kufamba. Uye kana ukasarudza nzvimbo kuti ane zvakanaka girl ichi kunogona kuwedzera ruzivo. Imwe yenzira dzakanakisisa misi ndambova chaiva kunonga mhuka howa mudondo. Luckily murume ndaiva nomumwe munhu aiziva izvo vaiva dzinodyiwa!
Chinhu ushingiwo akafanana abseiling kana zorbing - Nokuti adrenaline junkies ichi akakwana. Just nechokwadi musi wako anoziva zvauri kuronga uye nokuda kwayo usati waenda!
Enda zoo - Chinhu nezvikara iguru. Petting mhuka inogona kuti yenyu kudziyirwa kumusoro uye ari kufara kuti petting mumwe. Plus zvinobatsira kusunungura kuti zvose zvinokosha kemikari Oxytocin.
Horse pakufamba - Horse pakufamba anogona zvechokwadi kuva nokuseka, uyewo dambudziko kana usina vakaedza pamberi. Zvakare chete uchiongorora mudiwa wako nokuda dambudziko usati waenda sezvazvakaita kwete vose.
Art kuratidza - Kana vaviri wakaita iwe ichi kunogona kuita kuti cultured uye nakisisa nekubvimirana. Photo kwokuratidzwa kunogona kunakidza wo.
Kuwana A Pet anoti
5 Kudanana Taboos Zvaunofanira Kurambana kutiza